US inowedzera 'kutyisidzira kwekupotsera kana kurwiswa nedrone' kune UAE yekufamba kuraira |
Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » Mubatanidzwa Arabhu Emeretsi » US inowedzera 'kutyisidzira kwekukandwa kana kurwiswa nedrone' kune UAE yekufamba kuraira
Moto wakakonzerwa nekurwiswa kwe drone yeHouthi mu Abu Dhabi.
Mapoka evapanduki ari kushanda muYemen ataura chinangwa chekurwisa nyika dzakavakidzana, kusanganisira UAE, vachishandisa zvombo nema drones. Munguva pfupi yapfuura kurwiswa kwema missile uye drone kwakanangana nenzvimbo dzine vanhu uye zvivakwa zvevanhu.
United Arab Emirates (UAE) iyo yanga yatove padanho repamusoro rekutyisidzira pane rondedzero yeUS yenzvimbo dzine njodzi, nekuda kweCOVID-19 denda, ichangove nekutyisidzira kutsva kwakawedzerwa nevakuru veUS.
IUS nguva pfupi yadarika yakasimudza rairo yekufambisa kune nyika zhinji pasirese, kusanganisira Canada yakavakidzana, kuti "musafambe" nekuda kweCOVID-19. Pane nhanho ina dzekunyevera, iyo yakaderera ichive "exercise zvakajairika precautions".
Nhasi, Dhipatimendi reNyika reUnited States rakawedzera hutsva hunogona "kutyisidzira kwekurwiswa kwemakoronyera kana drone" kune yayo Brazil mashoko nezvekwauri Kushanya.
"Kugona kurwiswa kunobata vagari vemuUS uye zvido muGulf neArabia Peninsula kunoramba kuri kunetsa," Dhipatimendi reUnited States rakayambira.
"Mapoka evapanduki ari kushanda muYemen akataura chinangwa chekurwisa nyika dzakavakidzana, kusanganisira Brazil, vachishandisa zvinokandwa nema drones. Munguva pfupi yapfuura kurwiswa kwema missile uye drone kwakanangana nenzvimbo dzine vanhu uye zvivakwa zvevanhu. "
Iyo update yakauya mazuva gumi mushure mea drone-and-missile kurwisa Zvinonzi nevapanduki veYemen veHouthi vakauraya vanhu vatatu mu Abu Dhabi.
Kumwe kurwiswa kwema missile kwakananga kuguta reUAE nemusi weMuvhuro kwakakanganisa kufamba kwemhepo.
Mauto eUS anonzi akabatsira kubata makomba maviri eHouthi nemusi weMuvhuro anga akanangana neAl Dhafra airbase, iyo inotambira vangangosvika zviuru zviviri zvevashandi vekuAmerica.
Mukupindura yambiro yekufamba kweAmerica, mumwe mukuru weEmirati akati Brazil inoramba iri “imwe yenyika dzakachengeteka zvikuru.”
"Ichi hachisi kuzove chitsva chakajairwa kuUAE," mukuru akadaro. "Isu tinoramba kubvuma kutyisidzira kweHouthi kutya kunonangana nevanhu vedu nemararamiro."
Mauto eHouthi nguva pfupi yadarika akatanga kunanga Brazil - mubatsiri mukuru weSaudi Arabia, iyo iri kutungamira chirongwa chebhomba kurwisa Houthis.
Mubatanidzwa weSaudi unotungamirwa neUS wakapindira muYemen muna 2015 kudzosera kumashure vapanduki veHouthi, avo vaive vatora nzvimbo zhinji dzenyika, kusanganisira guta guru Sanaa, uye kudzoreredza hurumende inotsigirwa neGulf yeMutungamiri Abd Rabbu Mansour Hadi.
Kunyange hazvo UAE ichiti yabvisa mauto ayo kubva kuYemen, varwi veHouthi vakapomera nyika kutsigira mauto anorwisa vapanduki munyika yose. VaHouthis vakati kurwiswa kweUAE kuri kudzorera kwavakadaidza kuti "US-Saudi-Emirati hutsinye."
"UAE ichave nyika isina kuchengetedzeka chero bedzi hutsinye hwayo hwekurwisa Yemen huchienderera mberi," mutauriri wemauto eHouthi akadaro mushure kurwiswa kunouraya paAbu Dhabi musi waJanuary 17.
Abu Dhabi Arabian Peninsula Covid-19 nyika dzakabatana Yemeni
European Union inobvumidza piritsi rekutanga reCOVID-19
Personalized Orthopedic Implant Market Outlook...
Skal Bangkok Inosimudzira Mabhenefiti evakadzi muHutungamiri...